Tameelay - Page 51 of 64 - Knowledge & Motivation
ဘာမှ မရှိချိန်မှာတောင် လက်တွဲမဖြုတ်တာကို မေတ္တာစစ်လို့ခေါ်တယ်
ဘာမှ မရှိချိန်မှာတောင် လက်တွဲမဖြုတ်တာကို မေတ္တာစစ်လို့ခေါ်တယ် ကိုယ့်ဘက်ထက် သူ့ဘက်ကို ပိုတွေးပေးတာကို ဖေးမမှုလို့ခေါ်တယ် ပြဿနာတွေတက်တိုင်း အလျှော့ပေးတတ်တာကို သည်းခံမှုလို့ ခေါ်ပြီး အမှားလုပ်မိလို့ တေးမှတ်မထားတာကို သဘောထားကြီးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ မေတ္တာစစ်တယ် သည်းခံတတ်တယ် ဖေးမတတ်ပြီး သဘောထားကြီးတယ် ဆိုတာတွေက ယောကျ်ားလေးဖြစ်ခြင်း မိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး တစ်ဖက်လူအပေါ် […]
ဆဲတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါ မိသားစုကို ဆဲပါလိမ့်မယ်
ချစ်သူဘဝထဲကဆဲတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါ မိသားစုကို ဆဲပါလိမ့်မယ်….. ချစ်သူဘဝထဲကအရက်သောက်တဲ့ ယောင်္ကျားဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါ မိသားစုရှေ့ ဆက်သောက် နေမှာပါဘဲ….. ချစ်သူ ဘဝထဲက လောင်းကစား တပ်မက်တဲ့ ယောင်္ကျားဟာ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ မိသားစု စီးပွားရေး ထိခိုက်တဲ့အထိ ပြုလုပ်နေမှာပါဘဲ….. ချစ်သူဘဝထဲကမူးယစ်ဆေး သုံးစွဲတတ်တဲ့ […]
ဘဝတွေ . . .မတူတဲ့ဘဝတွေ လောကမှာ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်
ဘဝတွေ . . .မတူတဲ့ဘဝတွေ လောကမှာ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ် သင်မသိသေးတဲ့ သင်မမြင်နိုင်သေးတဲ့ ဘဝတွေလဲ အများကြီးပါသေးတယ် ။ ဒါကို သင်လက်ခံတယ်ဆိုရင် လူတိုင်းကို ကိုယ့်ဘဝနဲ့ နှိုင်းပြီး ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ပေတံလေးနဲ့တိုင်းပြီး ရှုံ့ချတာမျိုး အပုတ်ချတာမျိုးမလုပ်နဲ့ ။ အပေါ်ယံလေးကို မြင်ပြီးပဲ အရာရာကို […]
ဒီနေ့ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်လူနာ တစ်ဦး သေဆုံး သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြဳလူနာအမွတ် (Case – 110) သေဆုံးမႈႏွင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန႔၊ ေန႔လယ် (၁:၀၀)နာရီ (၁၉-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန႔တွင် COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြဳခဲ့ပြီး (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန႔မွစတင်၍ ေတာင်ဥက္ကလာပအထူးကုေဆး႐ုံ၌ တက်ေရာက်ကုသမႈခံယူကာ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန႔မွစ၍ အထူးကြပ်မတ်ကုသခံယူခဲ့ရသည့် ေသွးတိုးေရာဂါႏွင့် အၿမိဳးအစား (၂) […]
ကျွန်မဘက်က စေတနာသန့်သန့်လေးတွေ ထားခဲ့ပေမယ့်စော်ကားခံရတာတွေ ပြန်ရလာခဲ့တယ်
နယူတန်ပြောတဲ့ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့နိယာမကို ကျွန်မက ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်လာလာလိမ့်မယ်လို့ တစ်ယူတန် တွေးခဲ့မိတယ် တကယ်တော့ ကျွန်မဘက်က စေတနာသန့်သန့်လေးတွေ ထားခဲ့ပေမယ့်စော်ကားခံရတာတွေ ပြန်ရလာခဲ့တယ် မေတ္တာတွေ ပေးနေပေမယ့် လျစ်လျူရှုခြင်းတွေသာ ပြန်ရလာခဲ့တယ် ဂရုစိုက်မှုတွေလဲ ထပ်တူပါပဲ အလေးမထားခြင်းတွေသာ ပြန်ရလာခဲ့တာလေ ကိုယ့် မေတ္တာလဲ စစ်မှန်ခဲ့ပါတယ် ပြန်ရလာတာ […]
အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ ???အချစ်ရေး? နားလည်မှု့? သစ္စာတရား?အကုန်လုံးအရေးကြီးမယ်ထင်မိတယ် ရီးစားချစ်သူဖြစ်တယ် ကိုယ့်ကောင်မလေးကိုယ့်ချစ်သူကအချောဆုံး ချစ်လိုက်တာတုန်ရောမိုးမမြင်နေမမြင်လပါမမြင်တော့ဘူး။ ဒီမိန်းကလေးမှဒီမိန်းကလေး လက်ထက်လိုက်ကြတယ် ကလေးမွေးတယ်။ ဆက်ပြီးလှပနေတဲ့သူရှိတယ်။ ဝလာမယ်ပုံပျက်သွားမယ် အဲ့လိုလဲရှိမယ်။ အိမ်မှာနေတော့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလိုယောက်ကျားရလိုက်တော့ ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းပီ ကလေးရလိုက်ရင် ဘဝတစ်ခု လုံးပြောင်းသွားတယ်။ မိဘကကြည့်ကူလို့ လွယ်ကူတဲ့သူရှိမယ်။ အနားမှာဘယ်သူမှမရှိလို့ ခက်ခဲတဲ့သူရှိမယ်။ ကလေးကိုဂရုစိုက် […]
ကျွန်တော်က ခင်ဗျားအတွက် အရေးမပါဘူး . . . .
ကျွန်တော်က ခင်ဗျားအတွက် အရေးမပါဘူး . . . . သတိတရနဲ့ ပို့တဲ့စာတွေ ဖတ်ချင်တဲ့အခါမှ ဖတ်ပါ . . .အချိန်လေးအားပြီး ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှသာ ပြန်ပါ . . . ကျွန်တော်ကတော့ဒီမျှော်ရခြင်းတွေမှာ တဖြေးဖြေး နေသားကျလာပါပြီ ။ သတိရလို့ဆက်တဲ့ဖုန်းတွေလဲ သေသေချာချာချပစ်ပါ […]
တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ စပြီး အဓိဌာန်ဝင်ပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့..တနင်္ဂနွေထောင့်..မေတ္တာသုတ်တော်၆ခေါက်….၊တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါင်းကိုရည်မှန်းပြီးကန်တော့ပါ။ မိမိကုသိုလ်အလုပ်အားလုံးပြီးစီးသည့်အခါတနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကိုအမှုးထားပြီးဝေနေယျတို့ကိုမေတ္တာပို့အမျှေျျဝပါ။ တနင်္လာနေ့…သောကြာထောင့်မေတ္တာသုတ်တော်၂၁ခေါက်၊သောကြာနေ့ဖွားမြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါင်းကိုရည်မှန်းပြီးကန်တော့ပါ။ မိမိကုသိုလ်အလုပ်အားလုံးပြီးစီးသည့်အခါသောကြာဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကိုအမှုးထားပြီးဝေနေယျတို့ကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေပါ။ စသည်ဖြင့်……………..အထက်ပါအတိုင်းအတိုချုံးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ…..အင်္ဂါနေ့..ရာဟုထောင့်မေတ္တာသုတ်တော်၁၂ခေါက်………….၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာသာပတေးထောင့်..၊မေတ္တာသုတ်တော်၁၉ခေါက်…….၊ ကြာသပတေးနေ့..စနေထောင့်.၊မေတ္တာသုတ်တော်..၁၀ခေါက်၊သောကြာနေ့…ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်…၊ မေတ္တာသုတ်တော်..၁၇ခေါက်….၊စနေနေ့အင်္ဂါထောင့်..၊မေတ္တာသုတ်တော် ၈ခေါက် …..၊ တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာထောင့်…မေတ္တာသုတ်တော်၁၅ခေါက်….။မေတ္တာသုတ်တော်အဓိဌာန်ပြီးပါပြီ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတနင်္ဂနွေထောင့်ကနေစပြီးအဓိဌာန်ဝင်လာခဲ့တာပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲတနင်္လာထောင့်မှာအဓိဌာန်ပထမအဆင့်ပြီးသွားတာပါ။လုပ်နိုင်ရင် ဆက်တိုက် ထိုနေ့မှာပဲ…..မောရသုတ်တော်ကိုအထက်ပါအတိုင်းပဲတနင်္ဂနွေထောင့်ကနေစပြီးအဓိဌာန်ဆက်ဝင်သွားပါမယ်။ အထက်ကရေးပေးထားသည့်အစဉ်အတိုင်းပဲ…မေတ္တာသုတ်တော်နေရာမှာမောရသုတ်တော်ကိုအစားထိုးရွတ်ဖတ်သွားပြီး… ဆိုင်ရာနေ့ဖွားဘုရားရှင်တွေကိုလည်းနည်းတူကန်တော့ဆိုင်ရာဂြိုဟ်မင်းတွေကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းအမျှပေးဝေပြီး….ဆက်တိုက်ဆက်သွားပါ။ ရွတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့မိမိသည်….တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဘုရားစေတီကိုလက်ဝဲရစ်လှည့်ပြီးပူဇော်သွားနေတာကို သတိပြုမိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဓိဌာန်ကို တစ်ကယ်အခက်အခဲ ကြုံနေသူများသာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ( […]
ပရဟိတအဖွဲ့ကားဘက်ထရီတာင် အလွတ်မပေးတဲ့သူခိုး (ကားပိုင်ရှင်တွေ သတိထားကြပါ)
ပိုက်ဆံကမရှိပါဘူးဆို ကားဘက်ထရီအိုးအခိုးခံရ 29-4-2020 နောင်ချိုမြို့ သဖန်းကိုင်းပရဟိတကျောင်း သာသနာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ကားသည် ကျောင်း၏ ဆေးခန်းဘေးတွင်ရပ်ထားလျှက်ရှိပါသည် ၎င်းရပ်ထားသောနေရာတွင် ကား၏ ဘက်ထရီအိုးအား သူခိုးမှဖြုတ်ခိုးသွားပါသဖြင့် သဖန်းကိုင်းပရဟိတအဖွဲ့မှ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။ သဖန်းကိုင်းပရဟိတအဖွဲ့သည် သာသနာရေးကိစ္စ ပညာရေး ကျန်းမားရေးကိစ္စ စားဝတ်နေရေးကိစ္စရပ်များကို အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ […]
ချစ်သူ/ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ်
ဘဝတိုင်း ဆုံချင်လျှင် အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည်၊ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသေစွာရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ သူကြွယ်က ဤသို့လျှောက်သည်- မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် […]